Nei Maziso Edu Achida Kuwedzera Ruvara Palette Schemes ... Uye Kwamunogona Kuita Iwo | Martech Zone
Nei Maziso Edu Achida Kuenderana Ruvara rwePalette Schemes… Uye Kwaunogona Kuti Uigadzire
China, Kurume 18, 2021 China, Kurume 18, 2021 Douglas Karr
Wanga uchiziva here kuti pane chaiko sainzi yesainzi kumashure kwekuti maviri kana anopfuura mavara anowirirana sei? Ini handisi ophthalmologist kana chiremba wezve meso, asi ndichaedza kududzira sainzi pano kune vanhu vakareruka seni. Ngatitangei nemuvara kazhinji.
Makara Ndiko Kakawanda
Apuro rakatsvuka… handizvo? Zvakanaka, kwete chaizvo. Iko kuwanda kwekuti mwenje unoratidzwa sei uye kubviswa kubva pamusoro peapuro kunoita kuti uoneke, kushandurwa nemeso edu sezviratidzo, zvinotumirwa kuhuropi hwedu kwatinoratidza kuti "tsvuku". Ugh… zvinondirwadza musoro kungofunga nezvazvo. Ichokwadi hazvo… ruvara ingori kuwanda kwechiedza. Heano maonero eiyo electromagnetic spectrum uye yega yega 'mavara.
Ichi ndicho chikonzero nei mwenje muchena wakanongedzwa pachigadziko unogadzira muraraungu. Chii chiri kunyatso kuitika ndechekuti kristaro iri kuchinja kuwanda kweiyo wavelength sezvo mwenje wabviswa.
Iko krisimasi prism inoparadzira mwenje muchena kuva mazhinji mavara.
Maziso Ako Anowanzoona Matinji
Ziso rako rinongova frequency detector yehurefu hwemavara eruvara pane yemagetsi magetsi. Kugona kwako kuona mavara kunoitika kuburikidza nemhando dzakasiyana dzekoni mumadziro eziso rako izvo zvinobva zvakabatana nemitsipa yako yemaziso. Imwe neimwe frequency frequency inoonekwa neimwe yekoni, yobva yashandurwa kuita chiratidzo kune yako optic nerve, inotumirwa kuuropi yako, uko kwaanoonekwa.
Wati wamboona here kuti iwe unogona kutarisisa kwenguva yakareba pane chimwe chinhu chakanyatsosiyana musiyano, tarisa kure, uye ramba uchiona chitarisiko chisingaenderane nemavara ekutanga awanga uchitarisa? Ngatitii ndeyera yebhuruu pamadziro machena
Mushure mechinguva, masero ari muziso rako ayo anoshandura mwenje webhuruu anozoneta, zvichiita kuti chiratidzo chavanotumira kuuropi chako chisisina kusimba. Sezvo icho chikamu chekuona chakatarisana chakadzvanyirirwa zvishoma, kana iwe ukatarisa pamadziro chena mushure mekutarisa pabhuruu mraba, iwe uchaona isina simba orenji mushure. Izvo zvauri kuona ndeye chena chakatarwa chechiedza kubva kumadziro, kubvisa chidiki diki chebhuruu, icho uropi hwako hwunoita seorenji.
Ruvara Dzidziso 101: Kuita Inowirirana Colors Kushanda Iwe
Kana iko kuneta kukasaitika, maziso edu uye pfungwa hazvifanirwe kushanda zvakaomarara kududzira akawanda wavelengths (semuenzaniso. Mavara) avari kuona.
Ruzha Rwokuona Kana Rwuchipesana
Ngatiitei fananidzo yezwi maringe neruvara. Kana iwe ukateerera kune akasiyana mafrivit uye mavhoriyamu ayo anga asiri anoenderana kune mumwe nemumwe, iwe waizofunga nezvazvo se ruzha. Izvi hazvisi zvakasiyana nemuvara, panogona kuve nekupenya, musiyano, uye nemuvara zviso ruzha kana kubatsirana. Mukati mechinhu chipi nechipi chekuona, tinoda kushandira kubatana.
Ndokusaka iwe usingaone imwe yekuwedzera kumashure kweiyo bhaisikopo rakapfeka shati tsvuku yakajeka. Uye ndosaka vashongedzi vemukati vachishanda nesimba kuti vawane iwo anowirirana mavara pamadziro, fanicha, hunyanzvi, uye zvimwe zvinhu zvemukamuri yavari kugadzira. Ruvara rwakakosha mukugadzira mamiriro anowanikwa nemushanyi pavanopinda mairi zvichibva nekuti zviri nyore sei kuhuropi hwavo kududzira iwo mavara.
Your ruvara pendi zvakaenzana nekuunganidza bhendi mukuwirirana kwakanaka. Uye sekungofanana nemanzwi uye zviridzwa zvakaunganidzwa zvakanyatsoenderana nevhoriyamu uye kuwanda… ndozvinoita iwo mavara anowirirana eruvara rwevara rako. Ruvara palette dhizaini zvirokwazvo chimiro chehunyanzvi chevanyanzvi avo vakagadzirisa zvakanaka kuona kwavo kwemavara, asi iri zvachose saiti yekuverenga zvakare nekuti iwo mafambisirwo ekuremekedza anogona kuverengerwa.
Zvizhinji pane zvinoenderana munguva pfupi ... ngatidzokerei kurudzi dzidziso.
Pixels mukati medhi yedhijitari masanganiswa eatsvuku, girini, uye bhuruu. Tsvuku = 0, girini = 0, uye bhuruu = 0 inoratidzwa se chena uye tsvuku = 255, girini = 255, uye bhuruu = 255 inoonekwa se nhema. Zvese zviri pakati zvine ruvara rwakasiyana rwunoumbwa nevatatu. Iwo chaiwo mabhesiki ekushandisa komputa yekuwedzera iwo akapusa nyore… ingo bvisa iyo RGB kukosha kubva ku255 yeiyo nyowani RGB Kukosha. Heino muenzaniso:
Musiyano weichi chiyero chakareruka pakati peorenji nebhuruu chakaringana kuparadzaniswa izvo zvinopesana, asi kwete kusvika zvino izvo zvakaoma kuti maziso edu adudzire. Iwo mavara maficha anoenderana uye anofadza kune edu maapuro!
Komputa imwe ruvara kuri nyore… komputa 3 kana anopfuura mamwe mavara anowirirana anoda kuti iwe uverenge zvakaenzana zvakaenzana pakati peimwe yesarudzo. Ndosaka color palette scheme majenareta huya unobatsira! Nemakomputa mashoma kwazvo anodikanwa, maturusi aya anogona kukupa iwe akati wandei mavara anowirirana.
Iyo Ruvara Wiricheya
Kunzwisisa hukama pakati pemavara kunoonekwa zvakanyanya uchishandisa vhiri vhiri. Iwo mavara akarongedzwa mudenderedzwa akavakirwa kwete yavo hama frequency. Iyo nharaunda yakatenderera ndiko kuzadza kwemavara uye iyo azimuthal chinzvimbo pane denderedzwa seye hue yeruvara.
Chokwadi chinonakidza: Sir Isaac Newton akatanga kugadzira Colour Wheel muna 1665, hwaro hwekuyedza kwake nema prism. Kuedza kwake kwakatungamira kune dzidziso yekuti tsvuku, yero uye bhuruu ndiwo mavara ekutanga anobva kune mamwe mavara Side katsamba… akatoisa mimhanzi “manotsi” pavara rega rega.
Ndipe ruoko neHarmony…
Mhando dzeRudzi Huru
Hukama huri pakati pekuti sei yega yega seti yemakompuru mavara akaunganidzwa anozivikanwa se zvinowirirana. Heino yakakura yekutarisa vhidhiyo:
Hunhu hwakasiyana hwakabatana nemhando yega yega:
Analogous - mapoka emavara ari padyo nechero vhiri vhiri.
Monochromatic - mapoka akatorwa kubva kune imwechete base hue uye akawedzerwa achishandisa mumvuri wawo, matoni, uye matinji.
Utatu - mapoka emavara akaenzana akapatsanurwa kutenderedza ruvara vhiri
Complementary - mapoka emavara anotarisana kune rimwe vhiri vhiri.
Kupatsanura Kunowirirana - musiyano wekuwedzera uko uko kunoshandisa mavara maviri ari padyo nemubatsiri.
Rectangle (Tetradic) - inoshandisa mavara mana akarongedzwa kuita maviri anowirirana maviri
sikweya - yakafanana nekwereketani, asi iine ese mana mavara akaparadzaniswa zvakaenzana kutenderedza denderedzwa rerudzi
Compound - ruvara uye iwo maviri mavara ari padhuze neayo anowirirana ruvara
Mimvuri - kugadziridza kwechivara (kuwedzera kwechiedza), kana mumvuri (rima) kune iro rekutanga ruvara.
Aya haasi madingindira ekuzviisa pasi, iwo chaiwo masvomhu ekuverenga nemazita akanaka akashandiswa anotibatsira kuti tinzwisise zvirinani kuverenga.
Ruvara Palette Scheme Generators
Uchishandisa iyo palette palette scheme jenareta, iwe unogona kuwana akanaka, anowirirana mavara musanganiswa souyu:
Ini ndinowanzo shandisa color palette scheme majenareta pandinenge ndichishanda pane vatengi nzvimbo. Nekuti ini handisi nyanzvi yemavara, maturusi aya anondibatsira kusarudza zvirinani zvinhu zvakaita semashure, miganho, kumashure tsoka, ekutanga uye echipiri mabhatani mavara. Mhedzisiro iyi webhusaiti iyo inonyanya kufadza ziso! Iri zano risinganzwisisike, rine simba kwazvo rekushandisa kune yako dhizaini yechinhu - kubva kushambadziro kune webhusaiti yese
Heano mamwe makuru erudzi palette scheme majenareta pamhepo:
Adobe - chishandiso chinonakidza chine anosvika mashanu mavara paunogona kuyedza mhando dzakasiyana, kugadzirisa, uye kunyangwe chengetedza dingindira rako mune chero chigadzirwa cheAdobe.
BrandColors - iro rakakura muunganidzwa remahara brand brand makodhi akatenderedza.
Canva - isa pikicha uye ivo vanozoishandisa sehwaro hwepareti rako!
Colllor - gadzira inoenderana webhu pendi pendi nekungodzvanya mashoma.
Ruvara Dhizaini - Ingo sarudza vara kana kushandisa iwo akafanosarudzwa mavara uye iyo app inoita iyo yakasara.
Ruvara Hunt - yemahara uye yakavhurika chikuva chekufemerwa kwemavara nezviuru zvemafashoni akasarudzwa nemaoko palettes
Colourkuler - gadzira pendi yemavara ye Instagram kuti iwedzere kunakidza.
Colormind - jira rerudzi jenareta iro rinoshandisa kudzidza kwakadzama. Inogona kudzidza zvitaera zvemavara kubva kumifananidzo, mafirimu, uye hunyanzvi hwakakurumbira.
Colorspace - ingo pinda rimwe kana matatu mavara uye gadzira mamwe marongero!
Colourcode - chiitiko chinotonhorera che screen-yakafara yekugadzira yako pendi palette ine akati wandei ekuenderana masitayera kuruboshwe.
VANODI - nharaunda yekugadzira iyo vanhu vanobva kupasirese pasi vanogadzira uye vagovana mavara, mapletti, uye mapatani, vanokurukura zvazvino kuitika, uye voongorora mavara ane mavara.
Coolers - gadzira iyo palette yakakwana kana kufemerwa nezviuru zveakanaka mavara marangi.
Dhata Ruvara Picker - Shandisa iyo palette sarudza kugadzira akateedzana mavara ayo ari zvinoonekwa zvakaenzana.
Khroma - inoshandisa AI kudzidza kuti ndeapi mavara aunoda uye anogadzira palettes iwe kuti uwane, tsvaga, uye chengeta.
Material Design - gadzira, ugovana, uye shandisa zvirongwa zvemavara zveUI yako. Iyo inouya kunyange nekutengesa kunze kune yako app!
Muzli Colors - wedzera zita reruvara kana kodhi, uye gadzira palette yakanaka.
Paletton - sarudza iyo yekutanga vara uye ufuridzirwe.
Veranda - tora kufemerwa nematani anoshamisa mavara palettes.
Ruvara uye Kugoneka
Ndokumbirawo urambe uchifunga mupfungwa dzako paunenge uchisarudza kugadzira yako inotevera palette scheme kuti kune huwandu hwakakura hwevanhu vane kutadza kuona uye kushomeka kwemavara kunoda kusangana nezviitiko zvako.
Kusiyanisa - Ruvara roga roga rwakazvimirira rune luminance. Mavara ezvekufukidza uye zvepedyo zvinhu zvinofanirwa kuve neyakaenzana luminance ratio ye4.5: 1 kuitira kuti vanhu vane kuora kwekuona vakwanise kuzvisiyanisa. Ini handidi kupfuura nedambudziko rekuyedza kuverenga izvo iwe pachako, unogona kuyedza zviyero zvako zvemavara maviri ne Inopenya, Enzanisa Ratio, kana Mavara.
Iconography - Kusimbisa munda mutsvuku hakubatsire mumwe munhu ane kushomeka kwemavara. Ive neshuwa yekushandisa imwe mhando yemeseji kana icon kuti vazive kuti pane nyaya futi.
Focus - Vazhinji vanhu vanofamba nenzira nekhibhodi kana vanoverenga. Ive neshuwa kuti yako mushandisi interface yakanyatsogadzirwa neese ekuwanika kumaka iwo kuti vatore mukana wewebsite yako. Kune vanhu vane kutadza kuona, kushandisa chena nzvimbo uye kugona kuwedzera kana kudzikisa font-saizi uko isingaparadze marongero kwakakosha.
Iwe uri nyanzvi yemaziso here? Ruvara nyanzvi? Unyanzvi hwekuwanika? Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kundipa chero gwara rekuvandudza chinyorwa ichi!
Tags: analgouscanvamavara maficharuvara pendiRuvara palette zvirongwapendi dzemavarazvirongwa zvemavaramavara mavaramavarazvinowiriranainowirirana mavararemubatanidzwamesomonochromaticrectangletsvuku bhuruu girinirgbshadeskupatsanurana kunopindiranasquaretetradictriad
Imagen: Chengeta, Manage, uye Gadzirira Vhidhiyo uye Rich Media Zvemukati mune iyi Agile DAM